Home Ulo oru Europe Marek Hamsik Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Ejighị Ezi Ihe
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha ya bụ "Marekiaro". Ụmụnna anyị na Marek Hamsik Akụkọ akụkọ gbasara akụkọ ndụ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere isi ihe mgbaru ọsọ ya na enyemaka aka ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlere Marek Hamsik's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
Marek Hamsik mụrụ na 27th ụbọchị July 1987 na Banska Bystrica, Slovakia. A mụrụ ya nne ya, Renata Hamsik na nna ya Richard Hamsik.
N'ịbụ onye na-eto eto na Banska Bystrica (nke dị n'okpuru ebe a), obodo a maara nke ọma maka ihe dị mkpa na ihe owuwu ụlọ akụkọ, nwa-okoro bụ Oblak gbara ya gburugburu site na ịhụnanya sitere n'aka ezinụlọ ya na-egwu egwuregwu na-enyere ya aka ịmalite ọrụ ya n'oge na-adịbeghị anya.
Nne mama Hamsik bụ onye ọkpụkpọ aka na-arụ otu oge mgbe nna ya bụ onyeisi ndị agha Slovakia na-ahụ n'akụkụ ise nke oge ọmụmụ ntụrụndụ. Iji mee ka ezinụlọ ahụ zuru ezu, nwa nwanne Hamsik, Michaela bụ onye na-egwu bọtịnụ nke na-egwuri egwu maka ìgwè ndị obodo ha, Banská Bystrica.
Ọ bụ naanị Hamsik ka nna ya nwere mmetụta dị ukwuu iji tụlee ọrụ n'ịgba chaa chaa. N'ịbụ onye na-ejikọta na Nkà na Ụzụ Nne na Nna ya, Hamsik weere nzọụkwụ mbụ ya maka ọrụ ọkachamara n'ụzọ na-ezighị ezi site n'ịbanye na otu obere ndị ntorobịa, Jupie Podlavice kama ịmalite na otu obodo ya, bụ Dukla Banská Bystrica.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Egwuregwu Jupie Podlavice nyere Hamsik mkpa dị mkpa iji nwee ọganihu n'ime ndị ntorobịa bụ ndị a ma ama n'etiti ha bụ Slovan Bratislava, otu ụlọ ọrụ Hamsik gara n'ihu na 2002 n'okpuru ọnọdụ ịchụ àjà dịka ọ ga-echeta afọ ole na ole mgbe e mesịrị:
'Ana m akwụ ndị mụrụ m ụgwọ. Ọ bụ ezie na anyị abụghị ezinụlọ bara ọgaranya, ndị mụrụ m gara ogologo oge iji kwadoo m gụnyere na-ere nanị ụgbọ ala anyị nwere ka m nwee ike ịbanye Slovan Bratislava mgbe m bụ agadi 14. '
Hamsik abụghị onye na-eme ka ndị mụrụ ya mara àjà dịka ọ na-eme ihe niile dị n'ime ike ya iji mee ka ọ mara oge isii ọhụụ Slovan tupu ya agafee na Italian Club Brescia na 2004.
Malite na ụlọ ọrụ nke 19, Hamsik kwụsịrị ịrị elu meteoric iji mee ka mmalite nke Serie A na 2005 ma enwechaghị nkwanye ùgwù dị ka Brescia dị ka Brescia na-ezere ịchụpụ n'afọ ahụ.
Otú ọ dị, Hamsik nọgidere na-eji akwụkwọ Topa ya bụ nke hụrụ ka Napoli rịọrọ ya mgbe o dekọtara ihe mgbaru ọsọ iri na 40 Serie B.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Bilie Iji Mara Aha
Ọ bụ Napoli na Hamsik kwesịrị nlebara anya bụ nke malitere ozugbo mgbe ọ zụrụ ya na mbụ megide Cesena na Coppa Italia. Oge atọ gara aga na Napoli hụrụ na ọ na-eme ka ihe mgbaru ọsọ sie ike Eclipse Maradona dere dị ka onye na-eduzi ndị na-eduzi egwuregwu.
N'oge na-adịghị anya, Hamsik natara onyinye kasị mma na-eto eto na Serie A dị ka 'Oscar del Calcio' na Jenụwarị 2009. Onyinye a bụ ụdị mbụ nke ụdị a ga-enye onye na-egwu egwu n'enweghị mgbọrọgwụ Ịtali. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ndụ mmekọrịta
Onye na-eche echiche banyere usoro ọrụ na nhọrọ mmekọrịta nke na-arụ n'ime ezinụlọ agaghị anọ na-amụ ndụ nke Hamsik bụ onye zọgharịrị ụzọ nna ya (onye bụbu onye na-agba chaa chaa) site na ịlụ nwoke na nwanyị ịlụ di na nwunye otu egwuregwu nke nne Hamsik nọ na-arụsi ọrụ ike).
Hamsik na enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya bụ Martina Franova nọ na-enwe mmekọrịta dị ogologo.
Martina Franova bụ onye na-egwuri egwu na-egwu egwu maka ndị otu obodo, Banská Bystrica na nwanne nwanne Hamsik, Michaela. Mmekọrịta di na nwunye ahụ malitere mgbe Hamsik nọ na Brescia ma malite ifuru.
Di na nwunye ahụ kwuru maka afọ tupu ha alụọ na 4th nke July 2014.
Ha na ụmụ nwoke abụọ bụ Ndị Kraịst na Lucas (a mụrụ 2010 na 2012) ka ha na-enwe mmekọrịta ha na otu nwa agbọghọ Melissa, a mụrụ na December 2017.
Dika umuaka abuo malitere ime njem n'egwuregwu ha na ulo akwukwo na Udinese, ndi ozo enweghi ike ichere icho ma Melissa ga eme ka usoro ezumike nke ulo site na igwu aka.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ikewapụ ndị agha
Na November 2011, nwunye Hamsik dị ime, Martina Franova, ezuru ya na mberede, na-ewepu ihe onwunwe ya ma hapụrụ na Naples mgbe ndị na-apụnara mmadụ ihe hapụrụ na BMW ọ nọ n'ụgbọala.
Ihe merenụ nke mere ọtụtụ awa tupu Njikọ Njikọ nke Napoli megide Manchester City emeghị ihe ọ bụla iji dọpụ uche Hamsik na-egwu egwuregwu ahụ.
Ngwa ngwa ngwa na 2013, E zuru ohi Hamsik mgbe na-akwọ ụgbọala n'azụ ihe mgbaru ọsọ nke Napoli megide Sampdoria. A kọrọ na ndị na-apụnara mmadụ ihe kwụsịrị ma kụrie iko Gọọmenti Hamsik tupu ha agbaa égbè n'ihu ya.
A hapụrụ Hamsik n'enweghị ihe ọ bụla ọ ga-eme kama ọ ga-eme ka ihe ọ bụla ha chọrọ ka ọ na-eme ka ọ ghara ikpuchi anya ya n'etiti ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Iguzosi ike n'ihe nye ụlọ
Ọ bụ ezie na nnukwu ndị egwuregwu gụnyere Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi na Gonzalo Higuain hapụrụ 'nnukwu klọb', Hamsik kpebiri ịnọgide na-enwe n'agbanyeghị ọganihu ndị ụlọ ọrụ Bekee mere ka ha bịanye aka na ya na ohi na-eme ya na nwunye ya dị ime. N'ihi ya, a na-eme ememe Hamsik dịka dike nke a mụrụ n'oge a nke Napoli nanị mgbe Diego Maradona gụchara akụkọ ihe odide ya na Napoli.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ọ bụghị naanị A Shirt Number
N'ihe ejiji 17 aghọwo isi aha nke Hamsik nke na-egosi na ọ na-etinye na kits na-ebu ọnụ ọgụgụ n'oge ọhụụ maka ma Napoli na Team Team nke Slovakia. Dị ka onye na-eme skipper si kwuo, ọnụ ọgụgụ nke 17 a na-emechi emechi na-ekere òkè n'oge ọmụmụ ya na oge ya, eziokwu ka o kpughere n'oge mkparịta ụka na ndị nta akụkọ.
'A mụrụ m na 27th nke ọnwa nke asaa (July) na 1987, na 7pm,'
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Ihe kpatara ya bụ aha aha
Aha aha nke Hamsik, 'Marekiaro' na-esi n'akụkụ nke mbụ aha ya bụ 'Marke' na-agbanye ùgwù na mmiri nke mmiri dị ọcha nke dị gburugburu Napoli nke Neapolitans hụrụ n'anya nke ukwuu.
Marek Hamsik Nwatakịrị akụkọ akụkọ na -Eziokwu ahụ
N'ọgbọ egwuregwu, a kọwawo ya dịka onye na-arụ ọrụ ngwa ngwa, nke siri ike, nke na-arụsi ọrụ ike, na onye nwere ọgụgụ isi midfielder, onye nwere ike ịkụ egwu n'ọtụtụ ọnọdụ dị egwu.
Ike ya, ihe okike ya na ọkachamara nke ndú ya ahụwo ya ka ọ na-eje ozi dị ka onyeisi ndị isi ya na Napoli na Italian, yana ije ozi dịka onye isi na-elekọta ndị mba Slovakia.
Tụkwasị na nke a, ụbụrụ uche ya na akpakọrịta nke nnwere onwe obi ụtọ nke na-esonyere ya bụ àgwà ndị mere ka ọ pụta ìhè n'etiti ndị ọzọ egwuregwu ma mee ka o yie "enweghị ebe ọ bụla" ebe ọ bụla ọ na-aga.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Marek Hamski nke Ụmụaka na akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Luca Septemba 19, 2018 Na 5: 41 am
Aha a na-akpọ "Marekiaro" nwere obere akụkụ nke obodo Naples akpọ Marechiaro. Ọ bụ obere ebe site na mmiri ebe mmadụ nwere ike ile obodo dum nke Naples, gụnyere Mt. Vesuvius. Ọ mara mma ma kpọọ Marek Hamsik aha ahụ bụ "Marekiaro" n'ihi na kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụla ihe nnọchianya nke obodo anyị na otu. Ụdị aha a dị ezigbo mma, Hamsik maara nke ahụ ma hụ ya n'anya. Maka ozi ndị ọzọ, nchọpụta Marechiaro, Posillipo, Naples.